डिभोर्सको ४ वर्षपछि दुलाहा बन्लान ऋतिक ! | We Nepali
नेपालको समय: १८:४८ | UK Time: 14:03
डिभोर्सको ४ वर्षपछि दुलाहा बन्लान ऋतिक !
२०७४ माघ ४ गते १४:०६
ऋतिक रोशन फेरि एकपटक विवाह गर्ने विषयमा सोचिरहेका छन् । मिडियाहरुमा पनि उनको विवाहका विषयमा काफी चर्चा हुन थालेको छ ।
रोचक त के भने ऋतिकले विवाह गर्न खोजेकी युवती अरु कोही नभएर उनकी ‘एक्स वाइफ’ सुजैन खान नै हुन् । भारतीय मिडियाहरुका अनुसार करिब ३ वर्ष पहिले सुजैनलाई ‘डिभोर्स’ दिएका ऋतिक एक पटक फेरि आफ्नी एक्स वाइफसँग विवाह गर्ने विषयमा सोचिरहेका छन् ।
उनीहरु दुवै अक्सर आपसमा क्वालिटी टाइम पनि बिताइरहेको देखिन्छ । एक पपुलर बेबसाइटकाअनुसार दुवैका एक नजिकका साथीकाअनुसार ऋतिक र सुजैन फेरि एक हुने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर भएको विवादका विषयमा उनीहरुले अहिले राम्रैसँग बुझिसकेका छन् ।
उनीहरुका दुई वटा बच्चा ऋहान र ऋदानका लागि पनि उनीहरु सँगै हुने सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ । अहिले उनीहरु बच्चाहरुसँगै अक्सर आउटिङ र रेष्टुरेन्ट बाहिर पनि देखिने गरेका छन् । उनीहरु बच्चाको उचित लालनपालनमा आमा र बुवा दुवैको कमी हुन नदिनका लागि पनि एक हुने निर्णयमा पुग्न लागेका हुन् ।
१० जनवरीमा ऋतिकले आफ्नो ४४ औं वर्थ डे मनाएका थिए । यस मौकामा उनकी एक्स वाइफ सुजैनले ऋतिकको फोटो सेयर गर्दै आफ्नो लाइफको ‘सनसाइन’ भनेर लेखेकी थिइन् ।
जतिबेला कंगनाले ऋतिकमाथि गम्भीर आरोपहरु लगाएकी थिइन् । त्यतिबेला पनि सबैभन्दा पहिले सुजैन ऋतिकको पक्षमा खडा भएकी थिइन् ।
१६ डिसेम्बर २०१३ मा उनीहरु दुवैले आफ्नो १७ वर्ष लामो दाम्पत्य सम्वन्ध टुंग्याएका थिए । त्यही बेलादेखि दुवै सन्तान ऋतिकसँग बस्दैं आएका छन् ।